न्यायालयमा इमानको खोजी- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
अब किन जनसंख्या थप्नुपर्‍यो ? लगभग आधा करोड जनसंख्यालाई काठमाडौंभित्रै रोजगारी उपलब्ध हुन सक्छ ? आखिर त्यो विशाल जनसागर मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाका लागि काठमाडौं मध्यभागको भीडमै अलमलिने हो । जबकि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसाइँसराइ रोक्नु र कृषि जमिन बचाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । काठमाडौंको विद्यमान वातावरणीय तथा सांस्कृतिक सन्तुलन नबिगारीकन वैकल्पिक सहर बनाउन नहुने होइन तर त्यो सहर उपत्यकाबाट कम्तीमा पैंतालिस–चालिस किमि पर हुनैपर्छ । त्यो सहर काठमाडौंमा निर्भर होइन, आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । त्यो सहरभित्र उद्योग व्यवसायको अवसरदेखि अत्यावश्यक सरकारी सेवाको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । सन्तुलित विकासको मोडल यही हो । सरकारले दूरगामी सोच राखेर सहर निर्माण गर्नुपर्छ तर प्रस्तावित सहर काठमाडौंको व्यस्त रिङरोडबाट खालि दस बाह्र किमि पर बन्न लागेकाले समस्या झनै जटिल हुने निश्चित छ । उपत्यकाबाहिर किन बनाउन नहुने ? भिड, सवारी जाम, अव्यवस्था र प्रदूषणले सिकिस्त काठमाडौंलाई झनै क्षतविक्षत पार्ने गरी मान्छे थुपार्न हुन्न । सम्बन्धित सबैको समयमै ध्यान जाओस् ।
– जय वैद्य, ललितपुर